Mon, 27 Mar 2017 21:22:43 +0300 pm +03:00 10800	Feb, 2017
Dhegayso: taxanayaasha ARDAA2, waana shan iyo tobnaad ee ARDAA2_015. 27 Feb 2017. Mawduucun waa Baaxadda abaaraha Puntland iyo baqdinta laga qabo saamayntooda.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii afar iyo tobnaad ee ARDAA2_014. 23 Jan 2017. Mawduucun waa Doorashadii Baarlamaanka aqalka hoose iyo dareenka siyaasiyiinta.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii saddex iyo tobnaad ee ARDAA2_013. 09 Jan 2017. Mawduucuna waa shaqada aqalka sare ee Soomaaliya iyo awoodihiisa dastuuriga ah.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii labiyo tobnaad ee ARDAA2_012. 02 Jan 2017. Mawduucuna waa Shaqada ay qabato iyo sharciyadda lagu dhiso maxkamadda dastuuriga ah iyo ka marnaanteeda Puntlan
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii kow iyo tobnaad ee ARDAA2_011. 21 Dec 2016. Mawduucuna waa Qaybtii labaad ee dimuqraadiyadda fadhiidka ah ee Puntland iyo sababteeda.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii tobnaad ee ARDAA2_010. 13 Dec 2016. Mawduucuna waa Dawladda Puntland iyo heerkeeda ku dhaqan ee hannaanka dimuqraadiyadda.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii sagaalaad ee ARDAA2_009. 30 Nov 2016. Mawduucuna waa Dawladdii madaxweyne Xasan Sh Maxamuud, maxay ka qabtay arrimihii loo idmaday afartii sano ee ay jirta
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii siddeedaad ee ARDAA2_008. 21 Nov 2016. Mawduucuna waa Duruufaha ku xeeran doorashada Soomaaliya, walwal dib-udhac iyo doorka beesha caalamka.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii todobaad ee ARDAA2_007. 14 Nov 2016. Mawduucuna waa Doorashada Soomaaliya iyo dareenka siyaasiga.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii lixaad ee ARDAA2_006. 07 Nov 2016. Mawduucuna waa Haweenka Puntland iyo hammigooda doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii shanaad ee ARDAA2_005. 31 Oct 2016. Mawduucuna waa Doorka haweenka Puntland ee siyaasadda iyo doorashadii aqalka sare ee ka dhacday Garowe.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii afraad ee ARDAA2_004. 24 Oct 2016. Mawduucuna waa Khilaafyada siyaasadeed iyo saameynta ay ku yeeshaan hormarka bulsho iyo kan deegaanba.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii saddexaad ee ARDAA2_003. 17 Oct 2016. Mawduucuna waa Haweenka Galkacyo iyo heerkooda xuquuqeed.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii labaad ee ARDAA2_002. 10 Oct 2016. Mawduucuna waa qeybtii labaad ee Caabudwaaq iyo caqabadaheeda hormar, xuquuq haween, siyaasad iyo xal-u-raadintooda.
Dhegayso taxanayaasha ARDAA2, waana xalqadii koowaad ee ARDAA2_001. 03 Oct 2016. Mawduucuna waa Caabudwaaq iyo caqabadaheeda hormar, xuquuq haween iyo siyaasadba.